8 TOZỌ IDOZI MMS DOWNLOAD NSOGBU - ADỤ
8 Tozọ Idozi MMS Download Nsogbu
MMS na-anọchi anya Multimedia Messaging Service na ọ bụ ụzọ ịkekọrịta foto, vidiyo, obere vidiyo, site na ọrụ izipu ozi dị na ngwaọrụ gam akporo. Ọ bụ ezie na imirikiti ndị ọrụ agbanweela n'iji ngwa ngwa Izi ozi dịka WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, wdg, a ka nwere ọtụtụ ndị na-ahọrọ iji MMS na nke ahụ dị mma. The naanị nsogbu nsogbu na ọtụtụ gam akporo ọrụ mgbe mkpesa banyere bụ enweghị ike ibudata MMS na ngwaọrụ ha. Oge ọ bụla ha pịrị na bọtịnụ nbudata, ozi njehie enweghị ike ibudata ma ọ bụ faịlụ Media adịghị. Ọ bụrụ na ị na-echekwa nsogbu yiri nke ahụ na nbudata ma ọ bụ zipu MMS, mgbe ahụ isiokwu a bụ maka gị.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara njehie a. O nwere ike ịbụ n'ihi njikọ antanetị na-adịghị nwayọ ma ọ bụ enweghị oghere nchekwa. Agbanyeghị, ọ bụrụ na esemokwu a edozighi n'onwe ya mgbe ahụ ịkwesịrị iji aka gị dozie ha. N'isiokwu a, anyị ga-ekpuchi ụfọdụ ngwọta dị mfe ị nwere ike ịnwale idozi nsogbu nbudata MMS.
Usoro 1: Megharia ekwentị gị
Usoro 2: Lelee njikọ Internetntanetị gị
Method 3: Kwado Auto-Download MMS
Usoro 4: Hichapụ Ozi Ochie
Usoro 5: Clear Cache na Data
Method 6: Wepu Nsogbu Na-akpata Apps
Usoro 7: Gbanye na App Dị Iche
Usoro 8: Mee Tọgharia Factlọ ọrụ
N'agbanyeghi nsogbu ahụ, ịmegharị dị mfe nwere ike inye aka mgbe niile. Nke a bụ ihe kachasị mfe i nwere ike ime. Ọ nwere ike ịdị mma mara mma ma na-edochaghị anya mana ọ na-arụ ọrụ. Dị ka ọtụtụ ihe elektrọnik, ekwentị gị na-edozikwa ọtụtụ nsogbu mgbe agbanyụrụ yana ọzọ. Ghaghachi ekwentị gị ga-eme ka sistemụ gam akporo dozie ahụhụ ọ bụla nwere ike ịbụ maka nsogbu ahụ. Naanị jigide bọtịnụ ike gị ruo mgbe menu ike na-abịa wee pịa na Malitegharịa ekwentị / Reboot nhọrọ. Ozugbo ekwentị malitegharia, lelee ma nsogbu ahụ ka dị.
Multimedia ozi chọrọ a ufọk ufene internet njikọ ibudata. Ọ bụrụ na enweghị njikọ internetntanetị dị na ngwaọrụ gị, mgbe ahụ ị nweghị ike ibudata ya. Dọkpụ si ngosi panel na-eme ka n'aka na gị Wi-Fi ma ọ bụ data mkpanaka agbanyere . Iji lelee njikọta, gbalịa mepee ihe nchọgharị gị ma gaa na weebụsaịtị ụfọdụ ma ọ bụ ma eleghị anya kpọọ vidiyo na YouTube. Ọ bụrụ n’ị nweghị ike ibudata MMS n’elu Wi-Fi, wee nwaa ịtụgharị gaa na data mkpanaka gị. Nke a bụ n'ihi na a ọtụtụ nke netwọk ebu ekwela ka nbudata MMS gafee Wi-Fi.
-esi mee chrome ngwa ngwa 2019
Ọzọkwa Gụọ: Idozi njehie nyocha WiFi
Usoro 3: Kwado MMS nbudata na onwe
Ọzọ ngwa fix a nsogbu bụ nwee akpaaka-download maka MMS. Ndabara ozi ngwa gị gam akporo ama-enye gị ohere iji zipu ma SMS na multimedia ozi. I nwekwara ike ikwe ka ngwa a akpaghị aka budata MMS dika na mgbe inara ya. Soro usoro enyere n'okpuru iji mụta otu:
1. Mepee ndabere ozi ngwa na ngwaọrụ gị.
2. Ugbu a enweta na bọtịnụ menu (ntụpọ atọ) n'aka nri nke ihuenyo ahụ.
3. Pịa na Ntọala nhọrọ.
4. Ebe a, enweta na Nke di elu nhọrọ.
5. Ugbu a nanị toggle na mgba ọkụ na-esote Auto-download MMS nhọrọ.
6. I nwekwara ike gbanye nhọrọ iji budata MMS mgbe ịgagharị nhọrọ ma ọ bụrụ na ịnọghị n'obodo gị.
Mgbe ụfọdụ, ozi ọhụrụ agaghị ebudata ma ọ bụrụ na enwere ọtụtụ ozi ochie. Ndabara ozi ngwa nwere a ịgba na mgbe na-ahụ ruru ihe ọ bụla ọzọ ozi nwere ike ibudata. Na ọnọdụ a, ịkwesịrị ihichapụ ozi ochie iji hapụ ohere. Ozugbo ochie ozi na-arahụ, ọhụrụ ozi ga-akpaghị aka na-ibudata ma si otú idozi nsogbu nbudata MMS . Ugbu a, nhọrọ ihichapụ ozi dabere na ngwaọrụ n'onwe ya. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ngwaọrụ na-enye gị ohere ihichapụ ozi niile n'otu pịa site na Ntọala ndị ọzọ adịghị. O kwere omume na ịnwere ike ịhọrọ ozi ọ bụla n'otu n'otu wee hichapụ ha. Nke a nwere ike iyi usoro na-ewe oge mana tụkwasa m obi, ọ na-arụ ọrụ.
Usoro 5: Kọwaa Cache na Data
Ngwa ọ bụla na-azọpụta ụfọdụ data n'ụdị faịlụ nchekwa. Ọ bụrụ na ị na-enweghị ike ibudata MMS, mgbe ahụ, ọ nwere ike ịbụ n'ihi ihe mmapụta cache faịlụ ịlụ emerụ. Iji idozi nsogbu a, ị nwere ike mgbe niile gbalịa ihichapu oghere na data maka ngwa ahụ . Soro usoro ndị a iji kpochapụ oghere na data data maka ngwa ozi.
1. Gaa na Ntọala nke ekwentị gị wee pịa na Ngwa nhọrọ.
2. Ugbu a, họrọ Ozi ngwa site na ndepụta nke ngwa. Na-esote, pịa na Nchekwa nhọrọ.
3. will ga-ahụ ugbu a nhọrọ data doro anya na nchekwa doro anya . Enweta na nwoke bọtịnụ na kwuru faịlụ ga-ehichapụ.
4. Ugbu a, wepu ntọala ma gbalịa ibudata MMS ọzọ wee hụ ma ị nwere ike idozi MMS Download Nsogbu.
Usoro 6: Wepụ Nsogbu Na-akpata Apps
O kwere omume na njehie ahụ na-akpata site na ngwa ndị ọzọ. Ọtụtụ mgbe, ngwa na-egbu ngwa, ngwa dị ọcha, yana ngwa nje na-egbochi arụmọrụ nkịtị nke ngwaọrụ gị. Ha nwere ike ịbụ ọrụ maka igbochi nbudata nke MMS. Ihe kachasị mma ịme na ọnọdụ a bụ iwepụ ngwa ndị a ma ọ bụrụ na ịnwere. Malite na ọrụ igbu ngwa. Ọ bụrụ na nke ahụ dozie nsogbu ahụ, ị ​​ga-adị mma ịga.
Ma ọ bụghị ya, gaa n'ihu na iwepu ngwa ngwa ọ bụla dị ọcha na ekwentị gị. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ adịgide, mgbe ahụ usoro na-esote ga-abụ antivirus ngwanrọ . Otú ọ dị, ọ gaghị adị mma iwepụ ihe mgbochi nje kpamkpam ka ihe ị nwere ike ime gbanyụọ ya maka oge ahụ wee hụ ma ọ na-edozi nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na otu n'ime ụzọ ndị a adịghị arụ ọrụ, nsogbu ahụ nwere ike ịbụ na ngwa ndị ọzọ nke atọ ị ibudatara na nso nso a.
Bestzọ kachasị mma iji jide n'aka na nke ahụ bụ buut ngwaọrụ gị na ọnọdụ nchekwa. Na Ọnọdụ nchedo , ngwa ndị ọzọ niile nwere nkwarụ, na-ahapụ gị naanị ngwa sistemụ arụnyere. Ọ bụrụ na ị na-enwe ike ibudata MMS ọma na Nchekwa mode, mgbe ahụ, ọ na-egosi na onye mpu bụ a-atọ ndị ọzọ ngwa. Yabụ, Nchekwa mode bụ ụzọ dị mma iji chọpụta ihe na-akpata nsogbu na ngwaọrụ gị. Izugbe usoro reboot n'ime Nchekwa mode dị ka ndị a:
1. Firstly, pịa ma jide Ike button ruo mgbe Power menu gbapụta na ihuenyo.
2. Ugbu a, enweta ma jide Ike anya nhọrọ ruo mgbe Reboot ka mma mode nhọrọ Pop bu mmiri ogwu na ihuenyo.
3. Mgbe nke ahụ mechara, nanị pịa na Ok button na ngwaọrụ gị ga-amalite rebooting.
windo 10 kwalite onye enyemaka 1809
4. Mgbe ngwaọrụ malitere, ọ ga-agba ọsọ na Nchekwa ọnọdụ, yabụ, ngwa ndị ọzọ ga-enwe nkwarụ. I nwekwara ike ihu okwu echekwara echekwa na akuku iji gosi na ngwaọrụ a na agba ọsọ na Nchekwa.
Ọzọkwa Gụọ: Esi gbanyụọ Nchekwa na gam akporo
Usoro 7: Gbanwee na App Dị Iche
Kama ịrapagidesi ike na teknụzụ nke oge gara aga, ị nwere ike ịga n'ihu na usoro ndị ka mma. Enwere otutu ozi na ozi mkparịta ụka na-enye gị ohere izipu foto, vidiyo, faịlụ ọdịyo, kọntaktị, ọnọdụ, na akwụkwọ ndị ọzọ na-eji ịntanetị. N'adịghị ka ọrụ izipu ozi ndabara na-akwụ ụgwọ ego maka MMS, ngwa ndị a bụ n'efu. Ngwa dịka WhatsApp, Facebook Messenger, Hike, Telegram, Snapchat bụ ụfọdụ ngwa ozi izi ozi kachasị ebe niile n'ụwa taa. I nwekwara ike ịkpọ oku olu na vidiyo vidiyo n'efu site na iji ngwa ndị a. Ihe niile ị chọrọ bụ njikọ intaneti kwụsiri ike na ọ bụ ya. Ngwa ndị a nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mma ma hụ na ahụmịhe onye ọrụ dị mma karịa ngwa izipu ozi ndabara. Anyị ga-akwado gị tụlee ịmafe na otu ngwa ndị a na anyị ji n’aka na otu oge i mere, ị gaghị eleghachi anya azụ.
Usoro 8: Mee nrụpụta Factlọ Ọrụ
Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọ bụla na-arụ ọrụ na gị na ịchọrọ iji ngwa izipu ozi gị ka ibudata MMS, naanị ụzọ ọzọ fọdụrụ bụ nrụpụta Reslọ ọrụ. Nke a ga-ehichapụ data, ngwa na ntọala niile dị na ekwentị gị. Ngwaọrụ gị ga-alaghachi n'otu ọnọdụ ahụ ọ dị mgbe ịbupụrụ ya. Ọ baghị uru ikwu, nsogbu niile ga-akpaghị aka ga-edozi. Chọ maka nrụpụta ụlọ ọrụ ga-ehichapụ ngwa gị niile, data ha, yana data ndị ọzọ dị ka foto, vidiyo, na egwu na ekwentị gị. N'ihi nke a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya na ị mepụta ndabere tupu ị gaa maka nrụpụta ụlọ ọrụ. Imirikiti ekwentị na-akpali gị ịkwado data gị mgbe ịnwale factory tọgharịa ekwentị gị . Nwere ike iji ngwa arụpụtara maka ịkwado ma ọ bụ jiri aka gị mee ya, nhọrọ ahụ bụ nke gị.
1. Gaa na Ntọala nke ekwentị gị.
2. Kpatụ na Sistemụ taabụ.
3. Ugbu a ọ bụrụ na inwetabeghi data gị, pịa na Ndabere data gị nhọrọ iji chekwaa data gị na Google Drive.
4. Mgbe na pịa na Tọgharia taabụ.
5. Ugbu a pịa na Tọgharia ekwentị nhọrọ.
Etu ị ga-esi nweta Ntọala gam akporo
Etu esi enweta Gaminggba Cha Cha na gam akporo
Dịka e kwuru na mbụ, mgbe ụfọdụ nsogbu MMS na-ebilite n'ihi ụlọ ọrụ ụgbọelu. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ụlọ ọrụ anaghị ekwe ka izipu faịlụ karịrị 1MB ma n'otu aka ahụ agaghị ekwe ka ị budata faịlụ karịrị 1MB. Ọ bụrụ na ị nọgide na-eche nsogbu a ihu ọbụna mgbe ị gbalịsịrị ụzọ niile akọwapụtara n'elu, mgbe ahụ ịkwesịrị ịgwa ndị na-ahụ maka ọrụ netwọk gị ma ọ bụ ndị na-ebu gị. Pụrụ ọbụna tụlee ịmafe dị iche iche ụgbọelu ọrụ.
windo 10 ndekọ tweaks maka egwuregwu
njikọ mpaghara agaghị enwe ezigbo njikọ IP
setịpụrụ adaba USB windo 10
windo 10 na-amalite njehie menu
ibu youtube mana ha agaghi egwu egwu
windo 10 nọrọ na nnabata ihuenyo
windo adịghị emelite ka 1803